ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ ! (भिडियो सहित ) -
Home राेचक ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ ! (भिडियो सहित )
ब्वाईफ्रेन्डले भन्दा अर्काको पोइले मज्जा आउने गरि गर्दोरहेछ भनेर गायिका लक्ष्मी आचार्यले एक युटुब च्यानललाई अन्तरवार्ता दिएकी छिन् भिडियो अन्तिममा छ । त्यो भन्दा उनको बारेमा केही जानकारीहरु…….
‘नजिक नजिक सछर्न्’, ‘तीन साल अमेरीका’, ‘यो मोरीको घैंटोमा कहिले घाम लाग्ने हो’ उनका दोही गीतका भाका हुन् । सानैदेखि गीत गाउने आचार्य अहिले भने आधुनिक गीत गायनबाट चिनिएकी छन् । आधुनिकमा पनि केही डान्सिङ नम्बर समेत बजारमा ल्याएकी आचार्य स्टेज कार्यक्रममका लागि डान्सिङ बिटको गीत अनिवार्य रहेको बताउँछिन् ।
……..भिडियो अन्तिममा छ….. त्यो भन्दा पहिले पढौँ रोचक यौ..न कथा——– बैसाख जेठको गर्र्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं ।